प्यूठानमा फस्टाउदै बेकरी उद्योग | माण्डवी एफएम
प्यूठानमा फस्टाउदै बेकरी उद्योग
प्रकाशित मिति : २०७६ माघ ३, शुक्रबार ०७:२९
प्यूठान माघ ३
प्यूठानका केही युवाले बेकरी उद्योग सञ्चालन गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्योग सञ्चालन गरेका यहाँका युवाले मासिक रू. २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
लामो समय वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा काम गरेर नेपाल फर्किएका झिमरुक गाउँपालिका–४ चुधाराका वसन्तराज पोख्रेलले जिल्लामा बेकरी उद्योग सञ्चालन गरेर लाखौं आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । परिवार पाल्न वैदेशिक रोजगारीको बाटो अपनाएका उनले २०६८ मा नेपाल फर्किएपछि यो व्यवसाय शुरू गरेका हुन् ।
विदेशमा ४०–४५ डीग्रीको तापक्रममा भन्दा स्वदेशमै काम गर्दा आनन्दको अनुभूति हुने उनले बताए । विदेशमा झैं काममा खट्ने हो भने स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने निष्कर्षमा पोखरेल पुगेका छन् । उनले उद्योगबाट मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताए ।
त्यस्तै प्यूठान सदरमुकाम खलंगाका राजु गुरुङले पनि बेकरी उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । उनकोे उद्योगबाट पाउरोटी, खास्ता, क्रिमरोल, केक जस्ता खाद्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनले उत्पादन गरेका नास्ताका परिकार खलंगा, चुजाठाटी लगायतका बजारमा विक्री हुने गरेको छ । उनले ५ जना युवालाई रोजगारी समेत दिएका छन् । मासिक रू. ६० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताए ।
प्यूठानमा ११ ओटा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यी उद्योगमा करीब १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । २ दर्जनभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाएका छन् ।
प्युठानको धार्मिक पर्यटकिय गन्तव्य गौमुखीबाट नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को शुभारम्भ